Tag: okporo ụzọ | Martech Zone
Tag: okporo ụzọ
Thursday, August 11, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbe ndị mmadụ na-eche maka ịhazi ọdịnaya, ha na-eche maka data nkeonwe etinyegoro na ozi email. Ọ bụghị banyere naanị onye olileanya gị ma ọ bụ onye ahịa gị bụ, ọ bụkwa banyere ebe ha nọ. Mpaghara bu ohere buru ibu iji ghapu ahia. N'ezie, 50% nke ndị na-azụ ahịa na-achọ na mpaghara ha na ama ha gara ụlọ ahịa n'ime otu ụbọchị, yana 18% na-eduga n'ịzụta Dịka otu infographic nke Microsoft na VMob si kwuo,
Wenezde, August 13, 2014 Tuesday, August 12, 2014 Douglas Karr
Anyị ebipụtala Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnaya si Eloqua, nke ugbu a State nke 2014 Afọ Marketing, na 2014 Afọ Marketing Trends… ị na-amalite ịhụ isiokwu a afọ? Ihe omuma ihe omuma a site na Uberflip na-egosiputa onodu ugbua nke ahia ahia di n'etiti ulo oru B2B na B2C. Kedu usoro ndị ahịa na-ahọrọ ugbu a? Hà na-ahụ ihe ha tụrụ anya ya? Olee otú ọdịnihu ga-adị? Lelee ya! Ihe omuma ihe omuma a na-ewe obere ihe
Fraịde, Jenụwarị 31, 2014 Fraịde, Jenụwarị 31, 2014 Douglas Karr
Forrester na-ebu amụma na mgbakwunye mmefu ahịa ga-eto na $ 4 ijeri site na 2014, na-abawanye na ogo uto nke afọ 16%. Otu n'ime mkpebi ndị anyị mere na mmalite na CircuPress bụ ime ka ndị ọrụ ọ bụla nwee mmekọ. N'ụzọ ahụ, dịka e zigara ozi ịntanetị, ọ bụrụ na onye na-agụ akwụkwọ debanyere aha mgbe ịpịrị nkwado site na njikọ, a kwụghachiri onye zitere email ahụ ụgwọ. Nke a bụ atụmatụ skyrocketed na nyiwe ka DropBox… ebe
CMO weputara mmekọrịta mmekọrịta na Social Landscape
Tọzdee, Machị 22, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
CMO.com amalitela nduzi mmekọrịta zuru oke na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka afọ 2012. Onye ndu ahụ na-agagharị na ntanetị mmekọrịta ọ bụla, site na ịdebanye aha na ịkparịta ụka n'networkntanet, yana nkọwa otú onye na-ajụ ase na-esi enweta nkwukọrịta ndị ahịa, mgbasa ozi, okporo ụzọ na saịtị gị na injin ọchụchọ njikarịcha. N'okpuru ebe a bụ ihe okike nke ndu - mana saịtị ahụ ka mma - na-enye gị ohere idozi na ịmekọrịta n'ụzọ dị mfe.
Wenezde, August 17, 2011 Wednesday, December 12, 2012 Douglas Karr
Anọ m ọdụ n'ụlọ na-ejide ụfọdụ ịgụ akwụkwọ n'abalị a. Adị m onye mara mma nke na mgbe ọ bụla m kụrụ ụfọdụ okwu ọhụụ, m na-agakarị na Wikipedia iji chọpụta ihe m na-agụ. M na-ebilikwa ebe ahụ kemgbe ọtụtụ afọ… ya mere, mgbe m gụsịrị ihe ọ bụ, m tụgharịrị anya m wee laghachi ịgụ. Ihe mere m ji ewepụ anya m bụ na ndị ode akwụkwọ (ọkachasị ndị na-ere ahịa) na-eche na a manyere ha